रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको निर्माण : नयाँ जनवादी क्रान्तिमा नयाँ आयाम र चुनौति
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवाद साम्यवादमा पुग्ने लक्ष सहित विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकजुट गर्ने गराउने उद्घोष गर्दै नेकपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल सहितका चार पार्टीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका छन् । रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको आधारपत्र, संरचना र नेतृत्व सहित पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा भएको छ । नेपालमा विर्सजनमा पुग्दै गरेको कम्युनिष्ट आदर्श र आन्दोलनलाई पुनः नयाँ गति प्रदान गर्न यसलाई अग्रसरता रुपमा लिन सकिन्छ । संसारमा विरलै पाईले यस्तो प्रकारको रणनीतिक उद्देश्य बोकेको संयुक्त मोर्चाको गठन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन कै नवीनतम प्रयोग र आयामको रूपमा समेत अगाडि आएको छ ।
के हो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा ?
भिन्नाभिन्नै पार्टीका रूपमा रहेका तर समान रणनीतिक उद्देश्य भएका पार्टीहरूबीचको सहमतिमा रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि निर्माण गरिने मोर्चा नै रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हो । रणनीतिक उद्देश्य एउटै भएपछि त पार्टी एउटै बनाए भइहाल्छ नि ! भन्ने आम मान्यता रहँदै आएको छ र यसका आधारमा कतिपय पार्टीहरू एक भएका पनि छन् । एक भएपछि फुटेका अनुभवहरू पनि छन् । यसरी एकता र विभाजनको आरोहअवरोह भएको नेपाली जनताको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एकीकृत आन्दोलनमा संघर्षको माध्यमबाट रूपान्तरण गर्नु यसको मुख्य कार्यभार रहेको छ ।
नेपालमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएपछि यसले लिएको सशस्त्र किसान विद्रोहको कार्यदिशाको विरूद्ध सुधारवादी समन्वयवादी दरबारपरस्तहरूले योजनावद्ध पार्टी नेतृत्व र पार्टी केन्द्रमाथि हमला गरेपछि कथित बहुमतको नाममा पार्टीको मूल नीतिविरूद्ध प्रहार गरी नेपाली जनताको मुक्ति संघर्षलाई नै भ्रम दिएर दिशाविहीन गराउने कार्य भएका थिए । यसले आजसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यसरी विभाजित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई मूल प्रवृत्ति रहेका छन् । एउटा उग्र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी र अर्को उग्र बामपन्थी दुस्शाहसवादी । यस्तो हुनुमा आन्तरिक र बाह्य कारण रहेका छन् । निम्नमध्यम वर्गीय क्रान्तिकारी अवसरवाद आन्तरिक कारण हो भने यसलाई मलजल गर्ने भारतीय प्रभुत्ववाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद रहेको छ । जहाँ जस्तो छ त्यसै गरी कम्युनिष्ट आन्दोलन कम्युनिष्टकै नाममा विसर्जनमा लाने विश्व साम्राज्यवादको नीति अनुरूप यस्तो प्रवृत्ति थप विकास भएको हो । दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । र सत्तरीको दशकयता चिली, पेरू, बोलिभिया, कम्बोडिया नेपाल लगायतका देशहरूमा भएका उचाइमा पुगेका ठुल्ठुला मुक्ति संघर्षहरू कहीँ कतै पनि सफल हुन सकेनन् । यस्ता प्रकारका घटनाहरूबाट गम्भीर शिक्षा लिँदै शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायको संघर्षलाई संगठित र व्यवस्थित गरी निर्णायक संघर्षको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र यसका लागि यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको पहलकदमी ऐतिहासिक छ ।
नयाँ जनवादी क्रान्ति नै किन ?
नेपालमा पूँजीवादी क्रान्ति भइसक्यो भन्ने बुझाई पनि रहेको छ । रूपमा हेर्दा यो कुरा हो जस्तो लाग्दछ । सामन्ती व्यवस्थाको केन्द्र राजतन्त्र हटेपछि पूँजीवाद आइहाल्यो नि, अब त समाजवादी क्रान्तिमा लाग्नु पर्छ भन्ने मान्यता यदाकदा रहेको पाइन्छ । समाजवादी क्रान्तिकै कुरा गरौंन, समाजवादको विरोधी विचारधारा वा राजनीतिक प्रणाली भनेको पूँजीवाद नै हो । यदि यो कुरा हो भने नेपाली राज्यको उत्पादन प्रणाली पूँजीवादी छ त ? राजनीतिक चरित्र पूँजीवादी छ त ? सामाजिक सम्बन्धहरू पूँजीवादी छ त ? खुद जनताबाट निर्वाचित भनिएको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको चरित्र जनवादी वा जनहितकारी छ त ? निश्चय नै छैन नि । बरू यो त कतै सामन्ती कतै दलाल कतै नोकरशाही त कतै पूँजीवादी किसिमको देखिन्छ । यस्तो बहुरूपी चरित्र यो संसदवादी व्यवस्थाको रहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गरी साँचो अर्थमा समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको स्थापनाको पहिलो र आधारभूत सिँढी भनेको नै नयाँ जनवादी वा जनवादी गणतन्त्र नेपालको स्थापना हो । यसले सामन्तवादी, दलाल तथा एकाधिकार पूँजीवादीसँग सम्बन्धित सबै सम्बन्धहरूलाई नियन्त्रण गरी सामाजिक न्यायमा आधारित सम्बन्धहरूको स्थापना गर्दछ ।
मोर्चाका दुई कार्यनीति
राजनीतिक समीक्षा सभा र संयुक्त सरकार
राजनीतिक समीक्षा सभा: आजसम्म नेपालको राजनीतिक संघर्ष पुरानो सत्तासँग सम्झौतामा पतन भएको छ । पुरानो सत्ताको टेको भनेको यहि सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवाद हो । योसँगको सम्झौता हो । जसका कारण नेपाली जनताले आरामको श्वास फेर्न समेत पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था फेर्ने उद्देश्य सहितको विभाजित वर्ग आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनको निर्मम समीक्षा गर्ने भनिएको हो । र जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने भनिएको हो । यो आवश्यकता पुरा गर्न राजनीतिक समीक्षा सभालाई मोर्चाले एउटा जनसंघर्षको मुद्दा बनाएको छ । यो एउटा राम्रो प्रयोग सिद्ध हुन सक्छ ।
संयुक्त सरकार: विद्यमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै संसदवादको गोल चक्करबाट मुक्त हुँदै राजनीतिक समीक्षा सभाको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयुक्त सरकारको मुद्दा पनि शान्तिपूर्ण जनसंघर्षको एउटा सशक्त मुद्दा हो । जसले जनसंघर्षलाई विकास गर्न मद्दत गर्दछ ।
चार दिशामा फर्किएको चार पार्टी आफैंमा एक चुनौति हो र अवसर पनि । विपरितहरूको एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको माक्र्सवादी मान्यता अनुरूप कार्यनीति तथा कार्यक्रममा रहेका भिन्नताहरूलाई स्थगित गर्दै रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मोर्चा गठन सकारात्मक कार्य हो । माथि भनिएझैं एउटा अतिवादले अर्को अतिवादमा वस्तुतः पतन हुने अवस्था निर्माण गरिरहेको हुन्छ । हामीले यहीँनेर ध्यान दिन जरूरी छ कि कार्यनीति र कार्यक्रममा रहेका अतिवादहरूलाई कसरी जनतामा आधारित बनाउने, कसरी त्यसलाई जनसंघर्षमा रूपान्तरण गर्ने, कसरी जनसंघर्ष हुँदै जनविद्रोहमा विकास गर्ने, जनताको जीवनसँग जोडिएका वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनलाई वर्ग संघर्ष, वर्गीय पक्षधरताको आधारभूत र विशिष्ट मान्यतालाई गहिरो गरी पक्रने पंक्तिको निर्माण गरेर नै जनसेना निर्माणको आधार तयार गर्ने । कसरी क्रान्तिमा बल प्रयोगको सिद्धान्तको सही प्रयोग, जनसंघर्ष र जनविद्रोहको भट्टिमा खारिएका क्याडरबाटमात्र निर्णायक संघर्ष हुन सक्छ भन्ने मान्यतलाई स्थापित गराउने । र सक्षम र असल सुडेनीको भूमिका जनताबाट निर्मित जनसेनाबाट जनताको सहयोगमा पूरा हुनसक्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गराउने । यस्ता चुनौतिलाई समाधान गरी अगाडि बढ्नु नेपाली क्रान्तिको पहिलो चरणको कार्यभार पूरा गर्नु हो ।
नेपाली समाजको राजनीतिक विकासक्रम मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ । मात्रात्मक अवस्थाबाट गुणात्मक अवस्थामा बदल्न केवल माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरूले मात्र सक्दछन् । कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा जतिपनि बेइमानीहरू अतिवादीहरूले गरे त्यस्ता बेइमानका विरूद्ध सिद्धान्तनिष्ट इमान्दार प्रयत्न गर्न सक्दामात्र कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीले जनतामा आशा जगाउँछ । यस्तो आशाले मात्र निराश भएका जनताको आशा र आकांक्षा पूरा हुने बाटो खुल्न सक्छ ।